एकतापछि (नेकपा) सल्यानको नेतृत्वमा बस्नेत सिनियर कि ज्वाला ? « Postpati – News For All
एकतापछि (नेकपा) सल्यानको नेतृत्वमा बस्नेत सिनियर कि ज्वाला ?
दिपेन्द्र कुमार क्षेत्री । हिजोआज सल्यान (नेकपा)भित्र देखा परेको पछिल्लो पेचिलो मुद्धा भनेकै पार्टी एकता पश्चात कस्को नेतृत्व मान्ने विषयमै केन्द्रित भएको देख्न सकिन्छ ।
हरेक कम्यूनिष्ट पार्टीभित्र देखिदै आएको नेतृत्वको विबादबारे सल्यानमा समेत प्रभाव नपर्ने कुरै भएन । तर, मुख्य प्रश्न नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई अब एकताबद्ध गर्ने कि नगर्ने ? जनताले अनुमोदित गरेको कुरा मान्ने कि नमान्ने भन्ने नै हो ।
नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलन एकताको ऐतिहासिक अपरिहार्यता आबस्यकता र जनताले जुन रुपले अनुमोदीत गरे र गर्ने प्रकृयामा जाँदा पनि स्वीकार नगर्नु मुर्खता मात्रै होईन महामुर्खता हो । त्यसकारण कम्यूनिष्ट पार्टीले अझै पनि सांगठनिक अराजकता, गुटगत मानसिकतामा विभाजन र सर्वसत्तावादी मनोवृत्ति मै अघि बढ्ने हो ?
पूर्व माओवादी केन्द्र अर्थात सल्यानी माओवादी आन्दोलनको नेत्वमा को ? यस अघिको पुर्व माओवादीको जिल्ला अधिवेशनले नै टुंगो गरिसकेको बिषय हो । यसमा बिवाद गर्ने कुनै कारण नै छैन ।
बिषय रह्यो, दुबै पार्टी एकता हुँदा सिनियर को ? हो, सिनियर अहिले नाम चलेका सबैनेता समकालीन जस्तै हुन । यसमा कुनै दुबिधा छैन । तर पार्टी बहरियताक्रम तत्काल अवस्य जरुरी छ । आगामी दिनमा को नेतृत्वमा आउँने हो त्यो पछिको कुरा हो । तर यस विषयमा हाल सल्यान नेकपाको हकमा प्रतिनिधिसभाका सांसद समेत रहेका नेकपाका केन्द्रीय सदस्य टेकबहादुर बस्नेतलाई नै अघि सार्दा ठिक हुन्छ ।
जिल्लामा पहिलो मसाल कसले बाल्यो ? मुख्य कुरा त्यो होइन । संगठन, पार्टी र आन्दोलनले कसलाई नेतृत्व गर्ने स्थानमा राख्यो भन्ने कुरा ठुलो हो।
त्यसैले पार्टी केन्द्रले जिल्लाको नेतृत्वदायि भुमिकामा कसैलाई नतोकेको अहिलेको परिपेक्षमा टेकबहादुर बस्नेतलाई नै हाललाई नेकपाको पार्टी नेतृत्व मानेर जाँदा कसैले कुनै किसिमको हिनताबोध गर्ने अबस्था हुनेछैन भन्ने कुरालाई मनन गर्न जरुरी छ ।
अहिले पनि सल्यानी कम्यूनिष्ट आन्दोलनमा लागेका बस्नेतसँगैका समकालीन नेताहरु धेरै हुनुहुन्छ । हामीले उहाँहरुको योगदानलाई सम्मान नगर्ने भन्ने कुरा पनि हैन ।
भोलीका दिनमा बस्नेत संगैका समकालिन मध्यकै नेताले पनि जिल्लाको नेतृत्व गर्ने अबस्था पनि आउछ । तर तत्कालै तपाईहरुकै अनुकुलतामा व्याख्या मात्र गर्ने हो भने जुनसुकै कम्यूनिष्टले गरेका सल्यानी आन्दोलनमा होमिएका टेकबहादुरले कहिल्यै पनि आफु सिनियर हुँ भन्दै दाविगर्दै कुनै बबन्डर त गरेनन् ।
त्यसैले, कि सल्यानी कम्यूनिष्ट आन्दोलनमा सामेल सबै समकालीन नेताहरुले एकैस्वरमा हाललाई आम कार्यकर्तामाझ हामी सबै बराबरी भूमिकामा छौं भनेर सन्देश दिनुहोस् । हैन, भने यो पदीय भुमिकालाई देखाएर (नेकपा) सल्यानभित्र फेरी पनि भाँडभैलो रहेछ भनेर, वर्ग दुश्मनलाई हसाउँने र पार्टीभित्र गाईजात्रा देखाउँने काम तुरुन्त बन्द गर्नुहोस् ।
(लेखक वाइसियल नेपाल सल्यानका कार्यसमिति सदस्य हुन् ।)